Ikhotha eyikhothayo engayikhothi iyayikhahlela – Buza Noma Yini
Ikhotha eyikhothayo engayikhothi iyayikhahlela
Solved1.46K views July 6, 2021 ulimi LwesiZulu
Ake sibheke nasi isaga
Yini le ekukhulunywa ngayo la?
Lapha kukhulunywa ngenkomo.
Ize ikhothe enye kwenzenjani?
Inkomo imvamisa mayizinwaya isebenzisa ulimu, ishoba kanye namanqina. Kuyenzekake uthole ukuthi ayifinyeleli kahle iyabe isicela uzakwabo lo etholana naye ukuthi ayisize ke ayikhothe sakuyinwaya leyondawana ebabayo.
Ukukhothana kwezinkomo kungaphezu kokunwayana nje kuphela kepha kuhambisa nokuqinisa ubudlelwano nokuveza uthando, akugcini lapho ngoba ngisho enye igula kodwa ukukhothwa kwenza le egulayo izizwe kangcono.
Kuyenzekake kube khona ethatha amashansi ifune ukukhotha engayikhothi yona ilapho ke la ibe isiyifaka khona iSpin Kick .
Sisho ukuthini lesaga empilweni?: Umuntu akasize omsizayo ongamsizi naye akangazixaki ngaye.
Ikhotha eyikhothayo engayikhothi iyayikhahlela, lesi saga sisuselwa esenzweni sezinkomo ngoba phela izinkomo ziyakhothana engayikhothi enye iyaye iyikhahlele, sichaza ukuthi umuntu usiza amsizayo mayengamsizi naye ngeke amsize.